Namuhla, ezihlukahlukene imigoqo sasisikhulu kangangokuba umuntu akuyona ikakhulukazi ababeyizazi ukuphuza izikhungo, kungashiwo buthule lost in amagama abo abstruse. Futhi ngokuvamile igama ibha ukhuluma ngalokho isiqondiso aluthathayo, iziphi izici zayo, futhi okuyinto imenyu uzokujabulela. Ezinye izikhungo thina sesinomkhuba. Wonke umuntu uyazi ukuthi nesigaxa sushi ungakwazi ukujabulela imiqulu okumnandi, kodwa endaweni pub (noma pub) nibe nilindele ezihlukahlukene ubhiya. Kodwa yini isithixo ibha yokwamukela izivakashi? Leli gama empeleni esasisesisha ukuba iningi lethu, ngoba sekuyisikhathi ukuthola ukuthi kunani isici sale ukusungulwa enobungane.
Umoya Wokungenisa Izihambi - main
Isiqalo esithi "indawo yokulinda" lisho ukuthi "indawo yokulinda" noma "Hall". Uma sifaka izwi 'umgoqo' ke singathanda uthole ezinye inkolelo yokungafi ukusungulwa iIgama yomphakathi, esemgwaqweni yokulinda noma emnyango uhlobo oluthile isakhiwo esikhulu. Lokho sinjalo ibha endaweni yokwamukela izihambi. Kuyini futhi kanjani ukubheka ukuphila? Uma kwenzeka wahlala ehhotela, ngokuqinisekile kuba khona Esitezi has a Bartschik elincane lapho kwaba ezikahle ukuba inkomishi yetiye. Namuhla, lezi zindawo futhi wathola isiqalo "indawo yokulinda". Umsebenti wabo oyinhloko - ukwengeza lula i ukuhlala ukhululekile kakade ehhotela. Basuke zihlukaniswa isizotha, izihambi bese uthinta zasebukhosini. Lapha bazokwazi ukuhlangabezana ekuseni inkomishi yekhofi ngaphambi kokuhamba ekamelweni noma ukuchitha ubusuku ingilazi yewayini esihle.
Njalo ehhotela self-ukuhlonipha nje aphoqelelwe ukuba abe ibha endaweni yokwamukela izihambi. Design Its zingase zihluke kakhulu, kodwa ngokuqinisekile liyokwenza ukufanisa ezingeni kanye nekhwalithi yesevisi ihhotela uqobo. Kungaba ekamelweni elihlukile, okuyinto likwazi ukufinyelela kusuka yokulinda noma ibha uzobe elise kwesokudla elisendaweni yokwamukela abantu, eduze edeskini reception. Kungaba kwehlukaniswa ihholo elikhulu, isikrini ongokomfanekiso noma awunayo sanhlobo. Kodwa manje base usuqiniseka ukuthi uzohlangana endaweni yokucima ukoma, ngakho-ke armchairs athokomele, amatafula kancane wekugcina, a-plasma TV enkulukazi, imidlalo, i-Wi-Fi, iphunga heady yekhofi ezinhle. Ibha yokwamukela izivakashi ngokuvamile evulekile kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa emva kwesikhathi. Ekuqaleni kosuku ungabona intuthuko entsha ezivela ezweni abezindaba fresh, futhi kusihlwa nesikhathi esihle. Izingoma, emidansweni Karaoke kubha lokhu ngeke, kodwa uzokwazi ukuba uphumule ngemva kosuku olumatasa ngisho ubungani obusha ne njengawe, izivakashi yehhotela njalo.
Ibha yokwamukela izivakashi is eside Positioning ngokwaso njengoba isikhungo nesokuphumula, ngoba ezihlukahlukene iziphuzo, Ungadla kanye nama-dessert uyoba mkhulu. Kodwa isobho izigwaca eyayigcwele akunjalo kungaba. Ukuze dinner ocebile kungcono luwuphendule yokudlela. Kodwa nangohlobo lwezinto iziphuzo, utshwala kanye non-utshwala, ngokuqinisekile sicela. Ihhotela ngamunye ulwela ukugcina brand ayo, ngoba izinga lenkonzo yesibili none. Kumele sikhumbule ukuthi le ibha - yokudlela akuyona ukuzijabulisa, kungcono yenzelwe ehhotela izivakashi, ngakho ukuze amaklayenti kunani nonke ngeke ungakhohlwa: sicela izithelo, nama-dessert, ijusi yezithelo kanye okumnandi ehla, okuyinto ngenhlanhla ngokuvamile okulungiselelwe lapha. Ngo amahhotela ezinhle ezibizayo Ungahambisa iqoqo iwayini nogwayi. Kufanele kuqashelwe ukuthi amanani hhayi kungaba amancane, basuke ngokuyinhloko exhunywe ne-service futhi isimo ehhotela, kodwa ngokuqinisekile izinga isesikhathini par.
Ukuze kube lula kuwe,
Ufuna ukufunda kabanzi mayelana ukuthi umuhle Kunconywa ehhotela? Vakashela indawo yokulinda ibha yakhe (izithombe thina wacosha ezivela ezingxenyeni ezihlukahlukene zomhlaba). Le ngxenye ehhotela kungenziwa ngokuthi ikhadi lebhizinisi. Konke lwakhiwe ukuqinisekisa ukuthi uzizwa ukhululekile, ekhululekile futhi ukhululekile, futhi ngokuqinisekile ufuna buya lapha futhi. Ngokuqinisekile amukelwe ngezandla ezifudumele futhi ngokufudumele ukuqinisekisa kokuhlala ezimnandi, ukusiza futhi ukweluleka uma uthola kunzima uzulazule edolobheni engingalazi (ezweni). Lapha ungakwazi ukuthola abangane abasha, wabelane ngolwazi lwakho lokufunda izinto ezintsha. Futhi ukuzikhandla umkhathi abasebenzi lizobhujiswa liphele egxile kulokho oye ayiswe izinkumbulo egqamile futhi efudumele uhambo kude ekhaya.
Indawo yokudlela "yezinyoni Scottish": ikheli, izibuyekezo, izithombe
Okokuqala Gastropub e Kazan yokudlela "Romaine"
Anti-ikhefi (Izhevsk): lapho futhi ikakhulukazi
Cafe "Umculi", Petersburg: incazelo, imenyu kanye nokubuyekeza
Beer yokudlela "Uphinde agibele" Kaliningrad: incazelo, imenyu kanye nokubuyekeza
Amazinga ngesikhathi teething: kuyinsakavukela noma anomaly?
Meaning of igama Ilona - "ukhanyisa indlela", "Moonlight", "injabulo"
Ukuwela ka Dnieper amasosha aseSoviet ngo-1943
Doctor Setha izingane - ukuhlela umdlalo esibhedlela
Recipe lashizi - Isipho izinyo elimnandi!
Meryem Uzerli: Biography of actress ethandwa kakhulu e-Turkey